भ्याक्सिनका विषयमा पुटिनको झुट ! निश्चित उमेर समूहबाहेक अरुलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने – Sanchar Patrika
August 13, 2020 298
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जुन कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन सफल भएको घोषणा गरेका थिए त्यसको जाँच केवल ३८ जनामा गरिएको पाइएको छ । रुसको आधिकारिक दस्तावेजको हजाला दिँदै यसको खुलासा गरिएको छ । भ्याक्सिनका कैयौं साइड इफेक्ट पनि पाइएका छन् । रिपोर्टका अनुसार केवल ३८ जनामा गरिएको परीक्षणपछि भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइएको थियो ।
फोन्टांका समाचार एजेन्सीको हवाला दिँदै प्रकाशित रिपोर्टमा रुसको कोरोनाभाइरस लगाएपछि शरीर दुख्ने, सुन्निे, उच्च ज्वरो जस्ता समस्या देखिएका छन् । कमजोरी महसुस हुने, उर्जाको कमी, भोक नलाग्ने, टाउको दुख्ने, पखाला लाग्ने, नाक बन्द हुने, घाँटी खराब हुने जस्ता समस्या पनि रेकर्ड भएका छन् । रिपोर्टका अनुसार रुसी अधिकारहिरुले केवल ४२ दिनको अनुसन्धानपछि भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिएका हुन् । यही कारण भ्याक्सिन कति प्रभावकारी छ भन्ने थाहा हुन नसकेको रिपोर्टमा दावी गरिएको छ ।
भ्याक्सिन दर्ताको लागि पेश गरिएका कागजातमा महामारीमाथि भ्याक्सिनको प्रभावको बारेमा कुनै पनि क्लिनिकल स्टडी नभएको उल्लेख थियो । यद्यपि राष्ट्रपति पुटिनले भने जरुरी सबै टेस्टमा भ्याक्सिन सफल प्रमाणित भएको दावी गरेका थिए । रुसले आफ्नो भ्याक्सिनको नाक स्पुतनिक भी राखेको छ र कैयौं देशमा निर्यातको लागि पनि तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले यो भ्याक्सिनको कडा आलोचना गरेका छन् ।
रिपोर्टमा यो भ्याक्सिन सबै उमेर समूहको लागि नभएको पनि खुलासा गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका र ६० वर्षभन्दा बढी उमेरकाहरुलाई यो भ्याक्सिन लगाउन अनुमति दिइएको छैन । किनकि यी उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा भ्याक्सिनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । गर्भवती र बच्चालाई स्तनपान गराइरहेका महिलाहरुलाई पनि यो भ्याक्सिन दिइने छैन । यसअघि गम्भीर रोगसँग जुधिरहेका व्यक्तिहरुलाई पनि अतिरिक्त सतर्कताका साथ भ्याक्सिन दिने तयारी गरिएको छ ।
Next११ वर्षपछि सूर्यमा ठूलो हलचल, पृथ्वीलाई खतरा !
काठमाडाैंमा निशुल्क गुर्जो वितरण